डा. केसीसँग डा. भट्टराई भनेः 'म लज्जित भएर नैतिक समर्थन गर्न आएको हुँ'
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई भेटेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेर उनले डा. केसीको अनसनप्रति समर्थन जनाएका हुन्। उनले डा. केसीसँग सरकारी पक्षले संवादको पहल गरे नगरेको बुझेका थिए।
सर्वसाधारणको हक हितमा माग राख्नेलाई सरकारले यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै भट्टराईले आफू पनि लज्जित भएको बताए। ‘के गर्नु म बढो लज्जित भएर डा. शावलाई नैतिक समर्थन गर्न मात्रै आएको हुँ। के गर्नु ?’ उनले भने। राज्यले डा केसीका जायज माग र जोखिम उन्मुख स्वास्थ्यस्थितिबारे कुनै चासो नराख्नु अमानवीयताको पराकाष्ठा भएको उनले बताए।
भट्टराई हाल डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरू साझा भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई आफ्नो मुद्दा नठान्नु लज्जाबोध भएको बताए। उनले भनेका छन्, ‘सबैको साझा मुद्दा उठाउनु भएको छ, यो त राजनीतिक दलका नेतृत्वले उठाउनुपर्ने हो। तर तपाईँले मात्रै उठाउनुभएको छ। पटक पटक अनशन पनि तपाईँले मात्रै बस्नुपर्ने भयो। मलाई लज्जाबोध भएको छ।’
नागरिकको स्वास्थ्यका लागि डा केसीले आफ्नो जीवन जोखिममा राख्दै आएको स्मरण गर्दै भट्टराईले उनको जायज माग सम्बोधनको लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे। डा. केसी अनसनमा बसेको १७ दिन भएको छ। तर सरकारले संवाद गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मेन्सन गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘सरकार आँखा खोल!’